सरकार! तिम्रो राजनीति महिलाको शरीरबाट टाढा राख महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्छ पनि भन्ने अनि यस्ता विभिन्न प्रस्तावका बरेमा पनि छलफल गर्ने कतिसम्मको पाखण्डीपन हो यो? महिलाको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गर्नु कतिसम्म सही होरु खाडी वा अरु देश जाने महिलालाई देशले विभेद गर्न पाउँछ? सोमबार, फागुन ३, २०७७
भ्याक्सिन लगाउँदाकाे अनुभव त्यो रात अलि लामो भएजस्तो लाग्यो। बिहान उठेर ड्युटीतिर लागियो। कम्पनीले फेरिपनि जानकारी गराएको थियो।अब भ्याक्सिन नलगाए कोरोना टेस्ट... सोमबार, पुस २७, २०७७
जो भन्यो उही न्यायाधीश चाहिने भए किन चाहियो अदालत? तपाईहरुलाई आश्चर्य लागेको छ, देशलाई सम्झौता गर्ने फोहोरी खेल, विकासको गति अघि बढ्न नदिने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गर्न... शनिबार, पुस २५, २०७७
केपी ओली गणतन्त्र र संघीयताप्रेमी होइनन् केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण हामी आज यहाँ भेला भएका छौँ। कि अगाडि हिँड‚ सक्दैनौ भने बाटो छोड भन्ने मेरो विचार हो। जसपाले गरेको प... मंगलबार, पुस २१, २०७७
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, अदालतमा बहस गर्नु परेपनि तयार छौँ नेकपाले दुई तिहाई मत ल्याएको थियो। कांग्रेसलाई सानो पार्टी भएको भनेर चिन्ता भएको थियो। तर यो घटनाले फेरि अवसर आएको जस्तो भएको छ। यसम... मंगलबार, पुस २१, २०७७
विश्व चकित हुने गरी काम भएको छ पार्टीलाई व्यापक बनाएर यो वर्ष आँधीका रूपमा ल्याउनेछौँ। राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनु छ। स्वाधीनतालाई मजबुत बनाउनु छ। भौगोलिक एकता र स... शनिबार, पुस १८, २०७७
६४ प्रतिशतले विघटन गरेको हो‚ पुनर्स्थापना हुँदैन तपाईं नै सचिवालयमा प्रस्ताव राख्नुस् भनेँ उहाँले राख्नुभयो। गत वर्ष माघ १४ देखि १९सम्म भएको केन्द्रीय समिति बैठकले तीन महिनाभित्र टु... बुधबार, पुस १५, २०७७
नारायण राय यादवको मृत्यु सरकारले गरेको 'हत्या' होइन ? यी सबै घटनाक्रमलाई आम नागरिकप्रति राज्यको दायित्वका हिसाबले विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ सरकारले कति जिम्मेवारी बोध गरेको छ र कुन वर्... बुधबार, पुस १५, २०७७
ओली फाल्न आन्दोलनको तुफान आवश्यक आज पुस १४ गते‚ मलाई २०३७ साल चैतको सम्झना भएको छ। त्यो समयमा उत्रेको संघर्ष पुस ५ गतेका दिन चालेको प्रगतिगामी कदमको सम्झना भएको छ। ब... मंगलबार, पुस १४, २०७७
विदेशमा नयाँ वर्ष हामी आशा गर्दै छौं। २०२० को अन्त्यसँगै यो महामारीको अन्त्य हुनेछ । २०२१ हाम्रा लागि खुसीको वर्ष हुनेछ। परदेशमा खुसी भए पनि नेपालतिरक... शनिबार, पुस ११, २०७७
जननिर्वाचित संसदको कोखबाट भष्मासुरको जन्म सिंगो मुलुक फेरि संविधानको चीर–हरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन विवश छ । बाह्य खतराको कालो बादल देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जिम्मे... बिहीबार, पुस ९, २०७७
जननिर्वाचित सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि जनतामै जाने निर्णय (सम्बोधनको पूर्णपाठ) निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन ।... सोमबार, पुस ६, २०७७